डब्ल्यूएचओ भन्छ, 'सावधान ! कोरोना गर्मीमा पनि फैलिन्छ'
डब्ल्यूएचओ भन्छ, ‘सावधान ! कोरोना गर्मीमा पनि फैलिन्छ’
काठमाडौं। चीनको वुहान शहरबाट सुरू भएको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म संसारका ७९ देशमा फैलिएको छ। जुन गतिका साथ यो भाइरस फैलिइरहेको छ, वैज्ञानिकहरू भन्छन्, त्योभन्दा तीब्र गतिमा यो भाइरसबारे अफवाह फैलिइरहेको छ। जसका कारण मानिसहरू आतंकित भइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार, त्यस्ता हल्ला झुटा दावी, षड्यन्त्रको आशंका र गलत जानकारीमा आधारित छन्।
सामाजिक सञ्जालले ’आगोमा घ्यूु थप्ने’ काम गरेको छ। तातोले कोरोना भाइरस मार्छ भन्ने कुरा तपाईंले सुन्नुभएकै होला। अथवा, अधिक तापक्रममा यो भाइरस बच्न सक्दैन भन्ने सुन्नुभएको होला। यो हल्ला हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले भनेको छ, तातोमा हात सेकाउँदैमा भाइरस मार्दैन। उल्टै, ताप पैदा गर्ने विभिन्न उपकरणमा हात सेकाउँदा विकिरणहरूले छालामा असर गर्नसक्छ। वैज्ञानिकहरू तातो र कोरोना भाइरसको सम्बन्धबारे कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्।
यस्तै कोरोनाबाट बच्न जतिखेर पनि मास्क लगाएर बस्नुपर्छ भन्नेवारे चिकित्सकहरुले फरकफरक धारणा राखेका छन्। केहीले मास्क लगाउन भनेका छन् भने केहीले जरुरी नभएको बताएका छन्। अमेरिकाको ’सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) ले स्वस्थ मानिसले मास्क नलगाउँदा पनि फरक नपर्ने बताएको छ। त्यहाँका डाक्टर जेरोमी एडम्सको कुरा मान्ने हो भने, ’ढंगले लगाइएन भने मास्कले उल्टै जोखिम बढाउन सक्छ।’
कोरोना संक्रमितहरूले भने मास्क लगाउनैपर्छ, ताकि संक्रमण अरुलाई नसरोस्। त्यसबाहेक, संक्रमितहरूको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा अस्पतालका कर्मचारीहरूले पनि मास्क लगाउनैपर्छ। सिडिसीको सल्लाह छ, तपाईंको घरमा कोही कोरोनाका संक्रमित छन् वा कुनै सदस्यलाई यसको लक्षण देखिएको छ भने परिवारका अन्य स्वस्थ सदस्यले पनि मास्क लगाउनैपर्छ।
अन्यथा, मास्क लगाउनैपर्छ भन्ने छैन। काडमाडौंजस्तो प्रदूषित शहरमा मानिसहरू उसै पनि बाहिरफेर निस्कँदा मास्क लगाउने गर्थे। अहिले कोरोना भाइरसको हल्ला चलेपछि बजारमा मास्कको अभाव देखिएको छ, कालोबजारी सुरू भएको छ। हल्लाका कारण, नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर नै मास्कको हाहाकार भएको छ। फलस्वरुप, संक्रमितहरूसँग नियमित हेलमेल गरिरहनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीले समेत मास्कको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।